HomeBank: Waa Barnaamij Bilaash ah oo Furan Xisaabinta Shakhsiyeed | Laga soo bilaabo Linux
Tani waxay ka timid kharashyada maalinlaha ah ilaa kharashyada sanadlaha ah, sida lacagta caymiska, lacag bixinta kaararka, deebaajiga bangiga iyo wax kale waa inaan sameynaa dadaal gaar ah si aan u xasuusano dhammaan faahfaahinta maaliyadeed. Si kastaba ha noqotee, halista ah in la waayo amaah ama biil la bixiyo taariikhda loo qabtay ayaa had iyo jeer jirta. Xaaladda noocan ah waxaan ka faa'iideysan karnaa HomeBank.
HomeBank waa codsi maareyn lacageed oo shaqsiyeed oo ku qoran luuqadda barnaamijka C isla markaana qaabkiisa garaafka ah wuxuu adeegsanayaa GTK +Intaa waxaa sii dheer, HomeBank waa lacag la'aan, ilo furan oo lagu sii daayay qaybta GPL 2 iyo iskutallaabta.
1 Waxyaabaha HomeBank
2 Sidee loo rakibaa HomeBank Linux?
3 Sidee loo isticmaalaa Homebank?
HomeBank way fududahay in la isticmaalo oo ay ka buuxdo jaantusyada iyo xulashooyinka warbixineed, waxay leeyihiin qaabab kala duwan Si la mid ah waxaad ka filan karto qalab kale: ka soo dejinta Quicken, Microsoft Money, ama qaabab kale oo caadi ah, ogaanshaha macaamil ganacsi oo labalaab ah, noocyo xisaabeedyo badan, macaamil kala qaybsan, qalab miisaaniyadeed, iyo inbadan.
Sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan qeexno qaybaha si loo kala saaro loona sharaxo macaamil kasta, tusaale ahaan, marka wax la soo iibsanaayo, shidaalka la rarayo, iwm. Waad abuuri kartaa oo aad u xilsaaran kartaa nooc nooc kasta oo macaamil ganacsi ah. Kaliya tani kaa caawin mayso inaad si dhakhso leh u aqoonsato macaamil kasta, waxay sidoo kale ku siinaysaa awood aad ku kala soocdo, ku shaandhayso, oo aad ku falanqayso goor dambe.
HomeBank wuxuu xogtaada ku kaydiyaa fayl la yiraahdo jeebkaSidaa darteed, si aad u bilowdo isticmaalkeeda, markii ugu horreysay ee aad isticmaasho dalabka waa inaad sameysataa boorso cusub oo aad ka buuxisaa koontooyin, ka-faa'iideystayaasha iyo qaybaha.
inta u dhaxaysa Astaamaha ugu muhiimsan ee aan ku muujin karno codsigan waxaa laga heli karaa:
Waxaad ka soo qaadan kartaa xogta CSV, OFX, QIF iyo Amiga. Dhinaca kale, waxaad u dhoofin kartaa xogtaada HomeBank qaabka QIF.
Dhammaan noocyada warbixinnada HomeBank waa la daabacan karaa, oo ay ku jiraan miisaaniyadda, howlaha ba'an, waqtiga isbeddellada, iyo tirakoobka. Waxaad sidoo kale haysan kartaa diiwaanka macaamillada otomaatiga ah.
Waad isticmaali kartaa garaafkeeda kala duwan iyo qalabka shaandhada.
Waxay taageertaa 56 luqadood oo caalami ah.
HomeBank, barnaamijka xisaabinta shaqsiyadeed waxaa laga heli karaa Microsoft Windows, FreeBSD, iyo GNU / Linux. Waxaa u raray dhinac saddexaad shirkadda NMacOSX.
Intooda badan isticmaaleyaasha Linux waxay ka heli karaan nooc xirmaysan bakhaaradooda caadiga ah.
Sidee loo rakibaa HomeBank Linux?
Caannimada weyn ee arjiga awgeed waxaa laga heli karaa inta badan qaybinta Linux markaa rakibideeda nidaamkeena waa mid fudud.
Arinta ah isticmaalayaasha Debian ama nidaam kasta oo ku saleysan wuxuu ku rakibayaa HomeBank:
Halka loogu talagalay kuwa isticmaala Ubuntu, Linux Mint ama nidaam kasta oo ku saleysan Ubuntu waa inay ku daraan keydka soo socda Nidaamkaaga, tan awgeed waa inaan u furnaa terminal Ctrl + Alt + T oo aan ku dhex shaqeyno:
Waxaan cusbooneysiineynaa liistada xirmooyinka iyo keydadka
Ugu dambeyntiina waxaan ku rakibnaa arjiga:
para kuwa isticmaala OpenSUSE nooc kasta oo ka mid ah noocyadeeda, ku rakib:
Si waxaad tahay isticmaale Gentoo waad ku rakibi kartaa codsigan amarka soo socda:
Halka loogu talagalay kuwa isticmaala Mandriva ku rakib:
Hadaad isticmaaleyso Arch Linux, Manjaro, Antergos ama qaybinta kasta oo ku saleysan Arch Linux waxaad ku rakibi kartaa:
Ugu dambeyntii, Kuwa isticmaala Fedora, CentOS, RHEL ama qaybinta kasta oo laga helo kuwan waxaad ku rakibaysaa:
Sidee loo isticmaalaa Homebank?
Sidii hore loo yidhi waa lagama maarmaan in la abuuro jeebka dalab kaas oo laga bilaabo markaa aan bilaabi karno inaan muujino noocyada kharashyada, macaamilada, lacag bixinta iyo kuwa kale.
Arrintan awgeed waa inaan tagnaa liiska dalabka iyo gudaha "Fayl -> Cusub" halkan waxaan ka abuuri karnaa jeeb cusub.
Ikhtiyaar ahaan, sheegi karaa guryaha jeebka, sida magaca milkiilaha, adoo dooranaya Fayl -> Guryaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » HomeBank: waa codsi xisaabeed shaqsiyeed bilaash ah oo furan
SUSE Linux oo ay ku iibsaneyso shirkadda Sweden ee EQT Partners $ 2.5 bilyan